Valan-javaboary an-taonany vao teraka - inona no tokony hatao?
Reny Ny zaza tsy ampy taona
Raha ny zaza vao teraka amin'ny andro faharoa na fahatelo dia manana loko marevaka ny hoditra sy / na ny proteinina amin'ny maso, dia miatrika toe-javatra mahazatra mahazatra ianao, izay antsoin'ny tanora hoe zaza vao teraka.
Inona no hita avy amin'ny jelly?
Ny antony mivantana ny jadona amin'ny zaza vao teraka dia bilirubin ambony avo be ao amin'ny ra. Ny bilirubina dia votoaty novolavolain'ny fandringanana ny sela mena midadasika - sela mena. Erythrocytes dia misy hemoglobinina, izay mandray anjara amin'ny fihodinan'ny tavy sy ny taova miaraka amin'ny oksizenina. Rehefa teraka ao amin'ny fahazavana ny zazakely, dia manomboka mahazo oksizenina tsy avy amin'ny reniny izy, fa mivantana avy eny amin'ny rivotra mandritra ny fofonaina. Ny ra, ny embryonika, ny hemôglôbinina dia tsy ilaina amin'ny vatan'ny crumbs, ary ny "erythrocyte" redundante "misy azy dia manomboka misintona, miteniteny bilirubin, izay manana loko mavomavo na loko.
Amin'ny alàlan'ny fanitsiana sy fanonerana ny vatan'ny bilirubin dia "mitantana" ny aty. Raha ampy tanteraka ao amin'ny zaza vao teraka, bilirubin dia nesorina tao amin'ny vatan'ny zaza misy meconium (voan'ny zaza vao teraka) sy ny urine. Matetika anefa na dia amin'ny zaza salama amin'ny andro voalohan'ny fiainana aza no tsy voamarina ny tsy fahampian'ny rafi-biby enzyma ao amin'ny aty - amin'ity tranga ity, ny bilirubin dia tsy miala amin'ny vatana, fa entin'ny ra manerana ny vatana. Izy no mandoko ny vatana: hoditra sy moka - amin'ny mavo. Vokatr'izany dia hitantsika hoe inona matetika no antsoina hoe jwentita ny zaza vao teraka.
Ahoana no ialana amin'ny jelly?
Voalohany indrindra, mila mahatakatra ianao, miaraka amin'ny fanampian'ny dokotera, amin'ny karazana jelly anao no ifantohanao. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra (60-70% ny zaza vao teraka, matetika kokoa - amin'ny fahalemena sy aloha loatra), ny antsoina hoe jiro ara-nofo dia voamarika. Tsy aretina io, ary tsy ilaina ny manaraka izany. Ny fitsaboana tsara indrindra ho an'ny jono ara-pahasalamana dia fampiharana am-bolana sy matetika amin'ny tratra. Raha mahazo rononon-jaza ny zaza iray dia matetika izy no mandeha mandritra ny 2-3 herinandro. Ankizy miompana amin'ny famokarana artifisialy, fanoroan-kevitra amin'ny alàlan'ny fikarakarana ara-pahasalamana ara-batana, rano dopaivat amin'ny ririnina.
Ny bibikely, ny zaza osa sy ny hatsiaka, raha ny tokony ho izy, dia mbola mitohy ny fitsaboana fototherapy ao amin'ny toeram-pitsaboana ho an'ny fiterahana - fampirimana miaraka amin'ny jiro manokana avy amin'ny jelly. Eo ambany fiantraikan'ny fahazavana, ny "bilirubin" tsy ilaina "dia miparitaka any amin'ny diky tsy misy poizina izay nesorina tao amin'ny vatana tamin'ny gazo sy ny pipia.
Raha toa ka tsy maharitra maharitra mihoatra ny 3 herinandro ilay jungle - dia fotoana handinihana ny antony. Ny fiovana maharitra eo amin'ny hoditry ny hoditra sy ny mitefom-panala dia mety manondro ny fisian'ny icterus malemy. Ary koa ny ahiahiana dia:
dronono ny zaza, sasao ny malemy;
tsy fitoviana amin'ny fitsipika anatiny ao amin'ny rà bilirubina, hemoglobine, erythrocytes, reticulocytes.
Ny sikera pathological ao amin'ny zaza vao teraka dia mitaky fitsaboana avy hatrany, izay apetraky ny dokotera mifanaraka amin'ny antony mahatonga ilay aretina. Tsy misy ny fanontaniana momba ny fitondrana jelly toy izany ao an-trano. Miankina amin'ireo antony ireo ny karazam-pahaizana jadon'ny zaza vao teraka:
Hemolytic. Izany dia mitranga raha tsy mifanaraka amin'ny vatana ny ra sy ny foetus ary (na) ny fotony Rh, izay mitarika amin'ny fandringanana ny rà mena ao amin'ny ran'ny zaza.
Conjugation. Fanitsakitsahana ny fizotry ny fanoratana bilirubin, vokatry ny aretina nolovana.
Hepatic. Tandindomin-doza noho ny fahavoan'ny aty - raboka na toaka (ohatra: hepatita).
Mechanical. Izany dia vokatry ny fikorontanana ara-mekanika ny fipoahana kila noho ny endrika anatomika na ny cysts amin'ny valantsilimena.
Ny jundriale tsy mbola voatsabo dia mety hitondra mankany amin'ny encephalopathie bilirubin, na ny junta nokleary, izay mahatonga ny fahasimban'ny tovona amin'ny bilirubinina ho amin'ny volo mainty ao amin'ny atidoha. Izany dia mitarika ho amin'ny tebiteby, ny lethargy, ny fiovan'ny reflexes, amin'ny tranga faratampony - ny tsy fahampiana, ny marenina, ny faharetan'ny sainy.
Vahaolana amin'ny fampidiran-drano ho an'ny nasal swabbing
Firy ny lafarinina ilaina amin'ny zaza vao teraka?
Ny jiro alina ho an'ny zaza vao teraka
Feno ririnina amin'ny zaza vao teraka
Ny baikon'ny andron'ny zaza vao teraka
Mangatsiaka amin'ny zaza
Toby mena amin'ny zaza
Ny hemoglobinina ambany amin'ny zaza
Ny kôlôta dia manondraka ao anaty saosy matevina
Modely Irina Sheik
Oviana sy kibo
Ny zava-pisotro misy alikaola ho an'ny fahavoazana mavesatra
Ahoana ny famaritana ny firaisana ara-nofo amin'ny vongan-dranomandry?
Inona ny fanirian'ny olona, ​​ahoana no hampivelarana azy ireo sy hahatsapany azy ireny?
Niova fo i Britney Spears
Nahoana no nofinofy ny kapo?
Cream for skin problem
Kisary manga Rosiana
Fitsaboana gastritis amin'ny asidra avo
Gastal - famantarana ny fampiasana
Ny fomba hanadiovana ny vola madinika - ny fomba tsara indrindra amin'ireo mpanafatra traikefa
Ny toetran'ny lehilahy Cancer
Resadresaka tamin'i Kara Delevin sy Margot Robbie momba ny fisakaizana sy ny firaisana ara-nofo
© 2021 mg.everaoh.com